News - Falanqaynta isbeddelka horumarka mustaqbalka ee warshadaha qalabka Shiinaha ee Shiinaha
1. Guudmarka horumarka warshadaha qalabka xafiisyada
Qalabka wax lagu qoro waa qalab kala duwan oo dadku u adeegsadaan howlaha dhaqanka sida barashada, xafiiska, iyo nolosha guriga. Iyada oo horumarka joogtada ah ee dhaqaalaha iyo tikniyoolajiyadda, nooca qalabka xafiisyada sidoo kale si joogto ah ayaa loo cusbooneysiiyaa loona horumariyaa. Qalabka xafiisyada casriga ah qiyaas ahaan waxaa loo qaybin karaa qalabka wax lagu qoro, qalabka wax lagu qoro ee ardayda, Waxaa jira qaybo badan oo hoosaadyo ah sida xafiisyada xafiiska, qalabka wax lagu barto, qalabka xafiisyada iyo isboortiga.
Qalimaanta waxay ka tirsan yihiin warshadaha hoosaadka ee qalabka xafiisyada, waxayna had iyo jeer ku fadhiistaan ​​boos muhiim ah xafiisyada xafiisyada xafiisyada. Kooxaheeda macaamiisha badanaa ardayda. Warshadda waxsoosaarka qalinka Shiinaha ayaa dhalatay 1930-naadkii. Sannadkii 1932, Kowloon, Hong Kong, Shiinuhu wuxuu maalgashaday oo u beddelay warshad qalin oo uu maamulo ganacsade Ingiriis ah warshad qalin caan ah. Sannadkii 1933-kii, Shirkadda Shiinaha Shiinaha ee Shiinaha qalinka iyo Shirkadda Shaaha ee Huawen ayaa midba midka kale u muuqday. Wu Gengmei, oo ka soo laabtay Japan 1935, wuxuu aasaasay warshad caan ku ah qalin soosaarka qalin-sameynta oo dhan oo ku taal Shanghai oo soo saari karta diirkadaha hoggaanka, looxyada qalinka, qalinleyda iyo sameynta muuqaalka kaligiis. Shirkadda Harbin China Standard Pencil Company, oo ah shirkad iskaashi dawladeed iyo mid gaar loo leeyahay, ayaa la aasaasay bishii Sebtember 1949. Shirkaddu wali waxay ka mid tahay shirkadaha ugu waaweyn warshadaha qalin qaran.
Qalin qalin dhaqameedku wuxuu u isticmaalaa qoryaha sida foostada iyo garaafka asalka asaasiga, taas oo u baahan qadar badan oo alwaax ah in la cuno. Qadarka badan ee alwaax jarista waxay jebineysaa fikradda ilaalinta deegaanka. Si loo daboolo baahiyaha horumarinta suuqa, 1969, Shirkadda Teijin waxay soo saartay hab lagu soo saaro qalin qalinka. Xagaagii 1973, Shirkadda Berol ee Mareykanka iyo Shirkadda Sailorpen ee Japan ayaa iibsaday nidaamkan isku mar. Sailorpen wuxuu bilaabay wax soo saar balaaran qalin qalin ah bishii Abriil 1977. Waqtigaas, udub dhexaadka qalinka qalinka balaastigga wuxuu ka sameysnaa isku dhaf ah garaaf iyo cusbi ABS, dusha sare ee leedhka waxaa lagu dahaadhay rinjiga rinjiga. Saddex soo saare ayaa loo isticmaalay in lagu qaso saddexda maaddadood si qalin loo sameeyo, taas oo si weyn u fududaysay habka wax soo saarka qalinka. Marka la barbardhigo qalin-qoryaha caadiga ah ee qalinka ka sameysan, qalin-wadayaasha lagu soo saaray tijaabada ee loo yaqaan 'Sailorpen' oo dhan ayaa ka fudud ka loo isticmaali karaa, mana xoqi doonaan waraaqaha iyo gacmaha. Qiimuhu wuxuu la mid yahay kan qalinleyda caadiga ah. Qalin qalinka ayaa caan noqday. Sannadkii 1993, soo saaraha qalabka xafiisyada Jarmalka ayaa soo saaray khad soo saaris joogto ah oo loogu talagalay qalinyada caagga ah, oo saacad gudaheed ku soo saari kara qiyaastii 7,000 qalin. Qalinku waa dhexroor 7.5 mm dhererkiisuna yahay 169 mm. Qalinkan balaastigga ah wuxuu ubaahan yahay kharash waxsoosaar ka hooseeya qalin alwaax, waxaana loo samayn karaa qaabab kala duwan, sida xardhan, zigzag, wadnaha-qaabeeya, iwm.
Kadib horumarin muddo dheer ah iyo uruurinta kadib, warshadaha xafiisyada xafiisyada ee Yurub, Ameerika, Japan iyo dalal kale waxay qabsadeen jago xoog leh warshadaha xafiisyada caalamiga ah. Si kastaba ha noqotee, sababo ay ka mid yihiin kharashaadka shaqada iyo ilaalinta deegaanka, xiriiriyeyaasha soo saarista qalabka xafiisyada dhammaadka-hoose waxay si tartiib tartiib ah ugu wareegeen Shiinaha, Hindiya, iyo Hindiya. Fiyatnaam iyo waddamada kale ee Koonfur-bari Aasiya waxay si tartiib tartiib ah ugu gudbayaan heerarka hawlgalka astaanta, qaabeynta wax soo saarka, iyo cilmi baarista iyo horumarka.
2. Isbedelka horumarka ee warshadaha qalabka xafiisyada
1) Isticmaalka qalabka xafiisyada waxay u egtahay in lagu calaamadeeyay oo la shaqsiyeeyay
Qalabka wax lagu qoro ee qalinka waxaa badanaa loo isticmaalaa daraasad maalmeedka iyo shaqada. Iyadoo la hagaajinayo heerka dakhliga dadka deegaanka iyo hagaajinta fikradaha isticmaalka, macaamiisha ayaa aad ugu janjeera inay soo iibsadaan wax soo saar leh waxqabad aad u wanaagsan marka loo eego tayada wax soo saarka, heerka nashqadeynta, muuqaalka terminalka, iyo sumcadda isticmaalaha. Alaabooyin sumadaysan. Astaantu waa guud ahaan tayada, astaamaha, waxqabadka, iyo heerarka adeegsiga ee alaabada shirkadda. Waxay ka kooban tahay qaabka shirkadda, ruuxda iyo sumcadda, waxayna si ballaaran u saameyn doontaa dabeecadaha iibsashada macaamiisha.
2) Saldhigyada iibka xafiisyada xafiisyada ayaa u eg silsilado
Iyada oo la xoojinayo isbeddelka calaamadeynta ee isticmaalka xafiisyada xafiisyada, shirkadaha xafiisyada xafiisyada xafiisyada ayaa sii wadaya dhiirrigelinta qaabka hawlgalka silsiladda, iyo dukaamada xafiisyada caadiga ah ee xafiisyada ayaa sidoo kale muujinaya isbeddel si firfircoon uga qayb qaadashada xayeysiinta. Dukaamada caadiga ah ee xafiisyada xafiisyada waxay ahaan jireen marinka guud ee iibka xafiisyada xafiisyada, laakiin caqabadaha soo galaya oo hooseeya iyo tartanka qiimaha daran awgood, dukaamo badan oo xafiisyada xafiisyada caadiga ah waxay leeyihiin faa'iido liita, hawlgallo aan degganeyn oo xitaa looga takhalusay maamul xumo iyo lacag la'aan. Hawlgallada silsiladda xafiisyada noocyadeeda kala duwan ee loo yaqaan 'Franchising brand' waxay ku habboon tahay hagaajinta muuqaalka dukaanka, kor u qaadida tayada meelaynta alaabooyinka la iibiyay, iyo kor u qaadista awoodda iska caabbinta khataraha illaa xad. Sidaa darteed, sanadihii la soo dhaafay, isbeddelka silsiladaha iibinta qalabka xafiisyada ayaa muhiim ahaa.
3) Isticmaalka qalabka xafiisyada ayaa ahmiyad siinaya shaqsiyeynta iyo dhamaadka sare
Waqtigan xaadirka ah, ardayda iyo dhalinyarada ka shaqeeya xafiisku waxay doorbidaan xafiisyada xafiisyada wax lagu abuurayo, kuwa shaqsiga ah, iyo kuwa moodada ah. Xafiisyada noocan oo kale ah waxay badanaa leeyihiin naqshad hal abuur gaar ah, sheeko iyo muuqaal moodle ah, iyo midabbo midabo badan leh, oo buuxin kara shuruudaha aasaasiga ah ee shaqada isla markaana si weyn u Hormarin kara waaya-aragnimada isticmaalaha. Isla mar ahaantaana, dhinacyada sawirada, dhaqaalaha, naqshadeynta iyo hadiyadaha, kooxaha macaamiisha xafiisyada xafiisyada heer sare sare ee xirfadleyda ah ayaa sii kordhaya, iyo xafiisyada dhamaadka sare oo leh xirfad sare, tayo sare iyo qiime sare ayaa si tartiib tartiib ah u noqotay bar dhalaalaya cusub si kor loogu qaado Isticmaalka qalabka xafiisyada. Falanqaynta warshadaha ee khuseeya, fadlan tixraac warbixinta falanqaynta sahaminta suuqa warshadaha xafiisyada ee ay sii daayeen Hallka Warbixinta Shiinaha.